Category Archives: Xabashida
Al-Shabaab oo Raashin Gaarsiiyay Qoysas ku Dhibaateysan Gedo.
Xafiiska gargaarka wilaayada Islaamiga Gedo ayaa gurmad lixaad leh ufidiyay boqolaal qoys oo ku saamoobay abaaraha ku dhuftay deegaanno Gedo katirsan.
Deegaanno hoos yimaad magaalada Garbahaarey ayay mujaahidiintu geeyeen raashin,Dawo iyo biyo xilli shacabku ladhibaateysanyihiin duruufo kala duwan.
Mas’uuliyiinta wilaayada Gedo waxay sheegeen in Tuulo Barwaaqo iyo tuulooyin hoos yimaad ay ka qeybiyeen raashin nafaqeysan oo carruurta iyo haweenka taakta daran wax weyn utari doono.
Gobolka Gedo ayaa waxaa ka jirta abaar daran oo dad iyo duunyaba saameysay, waxaana ugu sii daran dhulka ay joogaan ciidamada Itoobiya iyo Kenya oo haddii wax la gaarsiin lahaa aaney suura gal ahayn.
Ciidamada Itoobiya oo ku jabay dagaalkii looga qabsaday CEEL-GARAS.
Kadib dagaal xoogan oo xalay ka dhacay degmada Ceelgaras kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada Xabashida Itooobiya iyo ciidamada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa saaka gabi ahaan waxey ciidamada Xabashida Itoobiya isaga baxeen degmadaasi oo ka tirsan gobalka Galgaduud,galbeedna kaga aadan Ceelbuur.
Xabashida ayaa go’odoon ku ah Ceelbuur oo ay qabdaseen dhowr bil ka hor mana jiraan wax jid ah oo u furan,ma jiraan wax shacab ah oo Ceelbuur ku nool,marka laga reebo Maleeshiyaad Soomaali ah oo tiradooda lagu sheegay 19 qof!
Ciidamada Xabashida Itoobiya ee ka cararay degmada waxey abaareen dhanka magaalada Dhuusa-mareeb oo ay markii hore kaga soo duuleen degmada Ceel-garas.
Degmada Ceelgaras waa degmadii ugu horeysay oo gacanta ay ku dhigaan ciidamada Mujaahidiinta Alshabaab kadib geeridii Sheek Abuu Zubeyr Amiirkii Alshabaab oo Maraykanku ku dilay Dron.
Ilo lagu kalsooni qabo warkooda ayaa inoo sheegay in safiirka dowladda Itoobiya u jooga madaxtooyada uu Xassan Sheekh uga digay in jagada laga qaado taliyaha BS-ta gobolka Banaadir oo ay iyagu markii hore kaalin ku lahaayeen magacaabistiisa.
Koofi ayaa caburin xooggan ku haya war baahinta iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada Muqdisho isagoo doonaya inuu caasimadda ka hir galiyo dhaqanka ka jira dhulka Soomaalida leedahay ee ay Itoobiya gumeysato.
Maxamad Aadan Koofi ayaa horaantii sannadkan tagay magaalada Adis-ababa halkaasoo uu kusoo qaatay siminaar la xiriira caburinta iyo cabsi galinta bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Saraakiil iyo ciidamo isku darkoodu yahay 30 ayaa ku geeriyootay weerarkii ka dhacay godka Jilacow oo xarun u ah BS-ta gobolka Banaadir, waana midda keentay in madaxda qaar ee dowladda ay damcaan iney casilaan Koofi, laakin Itoobiya ayaa is hor taagtay arintaas.
Geesta kale khilaaf xooggan ayaa ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra’iisulwasaaraha kaasoo ku saleysan xilkii shalay laga qaaday Sambaloolshe oo ay saaxiibo isku yihiin Xassan Sheekh.
Mmadaxweynaha ayaa ra’iisulwasaaraha ku cadaadinaya inuu dib usoo celiyo Sambaloolshe haddii kalana uu isna casili doono taliyaha Boliska iyo Abaan-duulaha ciidanka oo uu ra’iisulwasaaruhu keensday. Xaaladda ayaa aad u cakiray waxaana suura gal ah inuu soo dhex galo ergayga Qaramada midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya N/KaY.
Xasan Nuur “Magaalo ama Tuulo ay Itoobiya iyo AMISOM Qabsadaan Alshabaab halgankooda ma saamaynayso”
Posted on August 27, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa muddo todobo sanadood ah soomaaliya kula halgamaysa quwada shisheeye,Al Shabaab waxay ku guuleysatay in cadawga hororka ah ay ka caabiso cadawga iyadoona dagaalka gelisay qabaa’illada Soomaaliyeed ee Axraarta ah.
Ciidamada Xabashida Itoobiya iyo kuwa AMISOM isku magacaabay ayaa qabsaday magaalooyin dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya walina waxay u tafa xaydanayaan qabsashada degmooyin kale.
Dhammaan magaalooyinkii cadawga soo jireenka ah qabsaday wax nabad gelyo ah kama jirto magaalooyinka qaarna cadawga ayaaba lagu go’doomiyay iyadoona mujaahidiintu degeen waddooyinka soo gala.
Haddaba waxaa isweydiin mudan magaalooyin cadawgu qabsado ma wiiqi kartaa shabaabul Mujaahidiin?.
Khubarada melleteri iyo kuwa ka faalooda istiraatiijiyadda jamaacaadka jihaadiga ah ayaa aaminsan in dagaalka guurguura ee ku dhufo ka dhaqaaq uu yahay midka kaliya ee dhabarka looga jebin karo quwadda nidaamiga ah.
Shabaabul Mujaahidiin ayaa bishii Augst 2011 soomaaliya ka bilaawday dagaalka “Xarbul Cisaabaadka “ loo yaqaan kaasi oo lagu naafeeyay shisheeyaha soo duulay.
Siyaasiga Xasan Nuur oo in mudda ah usoo joogay isbed-bedellada siyaasadda soomaaliya iyo marxaladihii dalku soo maray ayaa aaminsan in Al Shabaab aan looga adkaan doonin magaalo laqabsado iyo deegaan laga riixo.
“Al Shabaab Soomaaliya way ku xididaysatay Fikirkeeda jihaadiga ah ee shisheeye iska dhicinta ah wuxuu ka gadmay intabadan bulshada soomaalida ee ku dhaqan gobollada Koonfureed,taariikhda ayaa wax walba xusi doonta shisheeyaha soo duulay gaar ahaan Itoobiya magaalooyin ay qabsadaan guul kuma gaarayaan”ayuu yiri Xasan Nuur.
Siyaasigan ayaa soo hadal qaaday wada shaqeynta ka dhaxaysa shabaabul Mujaahidiin iyo bulshada ay muddo ku dhaw 7 sanadood sharciga islaamka ku maamulaysay.
Isagoo tusaale usoo qaatay sida maamullada islaamiga ah ay ugu guuleysteen daminta dab colaadeedkii ka dhaxeeyay beelaha islamarkaana nabad gelyo waarta ugusoo dabaaleen min dhoobleey illaa iyo Xarardheere.
“Al Shabaab waa cunsur muhiim ah oo bulshada soomaaliyeed qalbiga ka degay adeegyada ay qabteen walina haayaan ee ammaanku ugu horreeyo ayaa qabaa’illada soomaalida ku riixaysa in ay garab iyo gaashaan unoqdaan”ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xasan Nuur.
Hoggaanka Shabaabul Mujaahidiin ayaa dhowr mar sheegay in ay ka go’antahay in cadawga soo duulay ay waqtiga ku dheereeyaan si ugu dambeyntiina iyagoo jabay oo dallaan dalka uga baxaan.
Sheekh C/caziiz Abuu Muscab Afhayeenka dhanka Melleteriga Shabaabul Mujaahidiin ayaa mar uu ka hadlayay qorshaha dagaalka ay cadawga kula jiraan yiri “Annaga degdeg dhanka dagaalka ah nama hayso dagaalkan Nabi ciise ayaan ku simaynaa illaa qiyaamahana waa sii socanayaa balse cidda waqtigu ceyrsanaya ee qandaraaska soo qaadatay waa gaalada dalka kusoo duushay”
DHAGEYSO:- Ciidamada Itoobiya oo boob xoogan ka geysatay Gobalka Bakool.
Posted on July 31, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Ciidamada Xabashida ee ku sugan magaalada Xudur ee gobalka Bakool waxey galinkii dambe ee shalay boob xoogan ka geysteen mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaaladaasi.
Deegaanka Ciidamada Xabashido boobeen waxaa lagu magacaa Abag-geedi oo 18km u jira magaalada Xudur’waxeyna gabi ahaan ciidamada Xabashida qaateen hantidii taalay goobaha ganacsiga ee deegaankaasi’waxeyna sidoo kale ciidamada Xabashida boobeen hanti u badan joodariyaal iyo maacuun oo ay kala baxeen guryaha ku yaala deegaankaasi.
SAWIRO:-Itoobiya oo Maamul iyada Taabacsan ka Dhisaysa Galguduud iyo Mudug,Xasan Sheekh oo Qalinka ku Duugay!!
Posted on July 30, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Generaalka ciidanka Itoobiya ee Soomaaliya General Gabre ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa xerada Xalane ee magaalada Muqdisho wuxuuna waday abaabul lagu dhisayo maamul goboleed Itoobiya hoostaga oo waji cusub uyeela gumeysiga Xabashida ee Itoobiya.
Hoggaamiyaasha dabadhilifyada Dowladda Federaalka ayaa sida caadada ah kasoo muuqday madasha lagu kala qeybsanayay gobollada Soomaaliya waxaana muuqata in ay yihiin kuwa Itoobiyaanku markaati uga dhiganayaan boobka dhulka Soomaaliya.
Saraakiil Caddaan ah oo ka socday Q.Midoobe Midowga Yurub iyo Max’med Cabdi Afeey oo metelayay Urur goboleedka IGAD ayaa ku sugnaa madashii lagu saxiixayay heshiis loogu magac daray dhismaha maamul midaysan oo ay yeeshaan Mudug iyo Galguduud.
N.Kay oo ah xaakimka rasmiga ah ee Soomaaliya xiligan gumeysiga ah oo hadlay wuxuu sheegay in uu ladhacay qorshahan cusub ee hal maamul loogu dhisayo Galguduud iyo Mudug islamarkaana uu kaabayo heshiiskii London ee dhigayay in Soomaaliya laga hirgeliyo maamullo taabacsan dowladaha dariska la ah Soomaaliya.
Dagaal Ooge Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo ku magacaaban madaxweynaha Galmudug ayaa heshiiska dhinac lasaxiixay waxaana barbar taagnaa Nin la sheegay in uu madax u yahay kooxaha suufiyada Galguduud ee Itoobiya raacsan.
Maamulka ka dhisan magaalada Cadaado ee Ximan iyo Xeeb ayaa iska diiday ka qeybgalka heshiis ku sheeggan waxayna ku tilmaameen mid khiyaano ah oo sii hurin kara colaad beeleedyada Mudug iyo Galguduud kajiray.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Itoobiya ay Generaal Gabre usoo xil saartay in uu dhidibada u taago maamul isku xira Min Beled Weyne illaa iyo Koonfurta Gaalkacyo.
Xasan Sheekh oo sheegta in uu yahay madaxweyne qaran ayay tani waji gabax iyo fadeexad ku tahay maadaama Generaal Itoobiyaan Tigree ah uu maamullo u dhisayo gobollo dalkiisa katirsan.
Soomaaliya oo wajahaysa gumeysi waxaa ka socda halgan ay mujaahidiinta Soomaaliya kula jiraan shisheeyaha soo duulay oo ay kamid tahay dowladda Itoobiya oo ah cadawga asalka ah ee shacabka soomaaliyeed.
ABARTAN GAALO YAY WAKIIL U TAHAY YAYSE KA TAHAY?
SAWIRO:-Sida looga Ciiday Magaalada Galhareeri iyo Ceelbuur oo markii ugu horeysay aan laga Tukan Salaada Ciidul Fidriga!.
Posted on July 29, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Kumanaan katirsan shacabka muslimiinta magaalada Galhareeri ee gobolka Galguduud ayaa si wanaagsan ugu damaashaadaya munaasabadda Ciidul fidriga.
Carruur farxad ka muuqato wajiyadooda ayaa isugusoo baxay waddooyinka magaalada inta aan salaadda latukan ka hor ayaa dadka fuqarada ah lasiiyay zakaatul fidriga.
Sawiradan Hoose waa fagaaraha salaadda ciidul fidriga magaalada Galhareeri
TAXANAHA TAARIIKHDA SOOMAALIYEED:-Cabdi Iley maxaa lagu xasuusan doonaa?
Akhristayaal marka hore waxaan idinku salaamayaa Salaanta Islaamka ASC WW, Salaan kadib waxaan idin leeyahay, Ramadaan Kariim kuna soo dhawaada Qormo kooban oo uu Ciwaankeedu yahay:- “Cabdi Iley maxaa lagu xasuusan doonaa markii Horjoogenimada laga xayuubiyo”?
Waa su’aal aan filayo in Qofkasta oo waxkasoo arkay ama udhashay Dalka Soomalida Ogaadeeniya Jawaabteedu udhibyar tahay meel fogna uusan kadoonaynin waayo dhagarta, ama dhibaatada uu shacabka gaadhsiiyay ayaa waxay tahay mid xad-dhaaf ah oo aan qormo kaliya lagu soo koobi karin.
Hadaba Akhriste Dhiig-kunaax Cabdi Iley oo aad wada garanaysaan, ayaa ah Horjoogihii 9′aad ee Guumaysiga Wayaanaha Ethiopia udhiibto Jagada Dabaqoodhinimo ee waxa ay ugu yeedhaan Madaxweynaha Kililka 5′aad, markaan leehay waa kii Sagaalaad waxaan kareebay Madaxwenihii Koobaad ee ay Soomaalida Ogaadeeniya yeelato, ALLE ha u Naxariistee Marxuum, Cabdulaahi Maxamed Sacdi Wuxuu Isagu kamid ahaa Aas’aasayaashii Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya ee JWXO, waxaa kale oo isna jiray oo kadanbeeyay Madaxweyne Xasan Jire Qalinle Eebe ha unaxariistee.
Hadaba Cabdi Iley oo ah Nin inta Xalaasha ah ee ILAAHAY raaliga kayahay Xaaraameeyay inta Xaaraamta ah ee ALLE xarimayna Xalaashaday ayaa wuxuu intii uu Jago kusheegta soo hayay dhibaato baaxad’leh Gaadhsiiyay Diinta, Dalka & Dadka Soomaalida Ogaadeenya, taasoo aan Tacadiyada uu gaystay Qalin & Qawltoona lagusoo koobi karin.
Bal aan fiirino waxyaabo kamida waxyaabaha lagu xasuusan doono Damiir-laawe, Cabdi Iley, hadii Shaadhka Horjoogenimo TPLF kala baxdo, Qodobada sida wayn loogu xasuusan doonana waxaa kamida:-
1- Xasuuq aan kala sooc lahayn.
2- Kufsiga Gabdhaha oo uu xalaaleeyay.
3- Dhaca Hantida Shacabka Soomaalida Ogaadeeniya oo aan kala joogsi lahayn.
4- Xabsi sabab La’aana oo dadka lagu guro Ciqaab aan qiyaas lahayna lagu mariyo.
5- Diinta Islaamka oo uu dadkii kafasahaadiyay.
6- Televessionka Beenta ama Borobagaandhada & dhaqan bi’iska da’yarta ee ESTV.
7- Nabad aan jirin oo Afka laga sheegto.
8- Hor’umar baan gaadhnay oo lagu hadaaqo, dadkuna ay Caafimaad la’aan la dhamaanayaan.
9- Kumaan dad ahi haday dhintaan ama abaaro wiiqaan bulshada oo aan lasheegin.
10- Wadada Dhiig Ogaadeen ee isku xidha Godey & Jigjiga oo daamur dusha laga mariyay.
11- Qax & Barakin Shacab.
12- Dad Qoxootinimo dalal kale ugalay oo inta laga dabatago lasoo laayo.
13- Khamrida & waxyaabaha maandooyaha ah oo agtiisa Caadi ka ah is na uu kuba qabaysto.
14- Dadawenaha Soomaaliyeed oo Qurbaha laga soo caa-caayo.
15- Hawaarin, Booran ama waxay ugu yeedhaan (Liyu Bolice) oo dhiiga Shacabka kuqabaysata.
16- Dadka rayid ka ah oo uu Gacantiisa kugaraaco.
17- Gubida Guryaha Shacabka & lawareegida Bootooyinka Danyarta.
18- Taalooyin ay Ethiopia Halgamayaashii Soomaaliyeed kusheeganayso inayna Soomaaliba jirine Soomaalidu waligeed ay Ethiopian ahayd oo Jigjiga laga taagay.
19- Inuu Cunay Hanti Ummadeed oo wax lagu qiyaaso jirin.
20- Inuu noqday Ninkii Koobaad ee u ooyay gaalkii weynaa ee Soomaali kala gaabiyay markuu bakhtiyay ILAAHAY-NA uga baray inuu Janadiisa kawaraabiyo, waa Wayaane MELES ZENAWI…….
Sawikani waa xiligii uu Meles Zenawi Bakhtiyay ee uu u barooranayay ama u ooyay!
Akhristayaal Qodabadaasi waa Arimaha sida wayn loogu xasuusan doono Dabaqoodhi Cabdi UBBO.
Hadaba markaan soo sheegnay Gabood-faladaasi uu gaystay iyo xaqiraada shacabka uu kuhafrayay waxaan Ethiopia-ba haysanin, & waliba Xasuuq wadareedyada uu sameeyay, markaan intaas oo tacadi ah inuu fuliyay aan marag kanahay waxaa markaaba kugu soo dhacaysa ninka sidaas udhaqmay maxaa laga yeeli doonaa? waxaan leeyahay, waxay utaalaa RABBI & rag, markaan sidaas leeyahayna waxaan kawadaa: markuu dhintana ILAAHAY baa laxisaabtami doona, inta uu dunida joogana marnaba wax lahilmaami doono ma’aha wuxuu gaystay, Rag baana laxisaabtami doona Maxkamadna soo taagi doona, INSHAA ALLAAH.
Intaas kadib bal aan Eegana fiirino Maansadan yar ee hoos kamuuqatana oo aan iyadana qoray markaan Qormada qalinka kadhigay kadib, Akhris haboon:-
>Cabdiyoow Caran baad tihiyo dibi Calool-wayne-
>Caqli hadaad leedahay Malese umaad Cabaadeene-
>Cibaada Alliyo Adigu waad kala Cadhootaane-
>Cadownimana Ciyaalkiyo, Ciroolaha yaad Cidhib-tiraysaaye-
>Caadilkii ku uumay kama yaabtidoo Caasibaad tahaye-
>Cirka iyo dhulkana waa lagaa nacoo waxaad Jeel latahay Cadaw Ilaahaye-
>Cilmi nimaan lahaynoo Wayaanaha Ethiopia Caabudaad tahaye-
>Caynkaagan oo kale ma’arag Cimrigay intaan jiraye-
>Caaqil nikii ihi Cadaabkii lageegii Abrahe muusan raali galiyeene-
>Cibaado iskuma daydidoo Khamradaad Cabi-taqaanaye-
>Caradaan lama joogayoo Casar kaliya weeyaane-
>Camalkii xunee aduunyada lagu falaa Aakharaa laysku Ciqaabaaye-
>Ceebiyo dan kama lihidoo Caadooyinka xun-xumi waa Camaladaadiiye-
>Cawaaqib xumaad latimid & Tacadiyadaad Shacabka gaadhsiisay hilmaaynee-
Cindigaaga taas gali…….
Fiiro Gaara ah:- Bulshada Soomaaliyeed meelay joogtaba ha Ogaato dhibaatada Joogtada ah ee dadka ay isku dubka, Diinta, dhaqanka, & Dhalashada yihiin ee Soomaalida Ogaadeenya, ee ay Ethiopia Gumaado hadh & habeen, loona adeegsanayo Maangaab Cabdi Iley iyo in lamida, waxaana uga digayaaa inayna Run moodin Riyada beenta ah ee kasocota Television-ka ay Ethiopia usamaysatay dhagarta shacabka soomaaliyeed ayna soo fadhiisisay shaqsiyaad AF-Soomaali kuhadlaya oo ah Calooshood ushaqaystaal aan iyagu dan, ujeeda kale oo kadanbaysa lahayn inay helaan Quutal-yoomkooda.
Waxaan hadalkayga kusoo gaba gabaynayaa Guusha Gobanimo-doonkaa iska leh, Guul-daradana Guumaysiga & Guumaysi raaca, Bulshada Soomaalida Ogaadeenyana waxaan usheegayaa in Samir & Dulqaad wax lagu gaadho waayo ILAAHAY ayaa Qur’aankiisa Kariimka ah kuyidhi “Wastaciinuu bisabri wasalaah inallaaha maca saabiriina”->>> Samir & Salaad Kaalmaysta ILAAHAY kuwa Samra ayuu Macooda yahay oo uu Lajiraaye>>> Ugu danbayntii Samraa Sadkii Ma’waayee hala samro, hana lagu dadaalo Jidka ugu toosan ee aan Guumaysiga kaga hoos bixi karo oo ah midka ay Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya Inagu hagayso.
Wixii talo & tusaale ah iigu soo hagaaji:- Xaqdoon99@gmail.com